साउनमा किन लगाउने मेहन्दी र हरियो चुरा ? यस्तो छ धार्मिक महत्व « Online Sajha
साउनमा किन लगाउने मेहन्दी र हरियो चुरा ? यस्तो छ धार्मिक महत्व
१ साउन, काठमाडाैँ । यतिखेर बजारमा हरियो पोशाकमा सजिएर हातमा हरियो र रातो चुराको साथै हातमा विभिन्न डिजाइनको मेहन्दी लगाएर युवती समूहगत रुपमा हिँडेको साँच्ची नै निकै आकर्षक देखिन्छ। साउन महिना धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक हरेक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेकाले वर्षमा एक महिनाभरि महिलाहरु हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउछन्।
यस्तो छ हरियो चुराको महत्व